Ny fakantsary iPhone 5s hitan'ny mpaka sary National Geographic | Vaovao IPhone
Mpaka sary iray an'ny National Geographic dia nitantara ny zavatra niainany tamin'ny fakantsary iPhone 5s
Ny iray amin'ireo fanatsarana miavaka indrindra amin'ny sainan'i Apple vaovao dia ny fakantsary. Na dia marina aza fa tsy niharan'ny fiakaran'ny megapixels raha oharina amin'ny iPhone 5 dia kokoa ny CARACTERISTICS-ny. Araka ny efa fantatsika, ny fakantsary iPhone dia nirehareha foana ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tsenan'ny smartphone, izay asehony isan-taona. Tamin'ity taona ity dia anjaran'ny 5 no naneho ny tombotsoan'ny fakantsariny teo imasom-bahoaka, izay tsy namela na iza na iza tsy hiraharaha.
Iray amin'ireo mpaka sary an'i National Geographic, Jim Richardson, dia nanao dia nankany Scotland niaraka tamin'ny iPhone 5s, izay nalainy sary mihoatra ny 4000. Ny vokatr'io dia i Jim mihitsy no gaga tamin'ny fakantsaritr'ity fitaovana ity, hany ka namoaka lahatsoratra tao amin'ny bilaogy National Geographic izay nahitany ny sasany tamin'ireo fahatsapany momba ilay fitaovana. Ny nahagaga azy indrindra, hoy i Richardson, dia ny kalitao ny sary, izay mahatonga anao tsy hanahirana ny fampiasana telefaona finday haka sary.
Mamelà anao sombiny avy amin'ny lahatsoratra izahay:
«Amin'ny fampiasana mavesatra (naka sary 4.000 teo ho eo aho tato anatin'ny efatra andro) hitako fa manana fakantsary ny iPhone 5s tena mahay. Ny loko sy ny fampirantiana dia tena tsara, ny fiasa HDR manao asa tsara tsy mampino izy io, ny endri-panoramic dia tsy mahagaga. Ny tsara indrindra dia ny mitifitra sary efajoro amin'ny taniny, miampy ho ahy satria maro amin'izy ireo no kasaiko hahantona Instagram. "
Ity vaovao ity dia efa nazava tamin'ny Phil Schiller, Filoha lefitra an'ny Apple an'ny Marketing Manerantany. Phil nisioka ny rohy mankamin'ny bilaogin'i Richardson miaraka amina lohateny hoe 'iPhoneography'.
Fanazavana fanampiny - Ny Instagram dia hanisy doka "tsindraindray" amin'ny endrika sary sy horonan-tsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5s » Mpaka sary iray an'ny National Geographic dia nitantara ny zavatra niainany tamin'ny fakantsary iPhone 5s
Odalie dia hoy izy:
Mampiahiahy kely fa misy mpaka sary National Geographic mandehandeha ary maka sary 4.000 amin'ny iPhone. Raha tena mpaka sary ianao, dia satria tianao ny maka sary ary tsy tonga aminao ny fakana sary amin'ny dia an-telefaona ary kely kokoa amin'ny fakantsary 8 mpx.
Tsy laviko fa manana iPhone 5s ity lehilahy ity ary naka sary niaraka taminy ary mieritreritra fa ho an'ny finday misy fakan-tsary 8 mpx dia maka sary mendrika izy, saingy efa nahita sary maromaro nalaina niaraka tamin'ny iPhone 5s sy finday hafa aho , toy ny ohatra ny Sony Xperia Z1, ary ny farany dia manatsara azy ireo ... kely kokoa ny feony.
Amiko ity fofona ity toa an'i Apple dia nametaka dibera tamin'ity rangahy ity hamoaka an'io lahatsoratra io ary nomeny azy ny iPhone 5s nifandraisany.
Valiny tamin'i Odalie
Lukas dia hoy izy:
Ary ohatrinona no nomen'i sony anao ???
Valiny tamin'i Lukas
Raha tsy misy aho, anontanio ny tonian-dahatsoratry Gizmodo hoe iza no nanao ny fampitahana sy ny sary amin'ireo terminal roa ireo.
ilicitano_elx dia hoy izy:
Toa mampihomehy ahy ny manohy ny ady megapixel, averiko toy ny imbetsaka, vendrana aho, nividy marika 5d miaraka amin'ny 22 mpx efa ho 2800 Euros an'ny elatra aho, afaka nividy lumia 1020 ho an'ny 2000 Euro latsaka ary z1 ny 2200 euro Na izany aza, tsy nilaina ny nolazaiko na aminao dia manohy manenjika azy ireo izy ireo satria mihabe ny megapixels dia ... tsara kokoa, mandritra izany fotoana izany, ireo mpangataka sary dia manahy bebe kokoa ny amin'ny haben'ny sensor sy ny optika mendrika. izay tena lafo, miaraka amin'ny 8 mpx ao anaty compact dia manana 3 haben'ny sary betsaka ianao, ary miaraka amin'ny 12 hialana voly raha toa ianao ka amateur manana reflex, ny fametrahana 40 tapitrisa teboka amina sensor tsy mitovy amin'ny haben'ny lentil dia tsy misy ilana azy afa-tsy ny sarinao hibodo atody.
Mamaly an'i ilicitano_elx
Android dia hoy izy:
Ny antony iray manontolo ... ny paoma dia efa ambanin'ny telefaona hafa izay tena tsara amin'ny fakantsariny sy ny asany hafa (galaxy s4, galaxy note 3, nexus, LG G2 ... sns sns, sahiko aza ny milaza an'io alcatel io. Apple efa mba hahazoana dokambarotra, tsy ampy ho azy ny maka tahaka ny android sy ny symbian, ankehitriny dia efa mandoa vola izy ireo hiresaka zava-mahatalanjona momba ny efa-joro taloha sy tsy misy revolisionera 😉
Mamaly amin'ny Android
Mandra-pahoviana no hahatsiarovantsika fa tsy misy ilana azy daholo ireo megapixel ireo, apetraho anaty solosaina izay tsy hampiasa azy ireo, vao nampiseho izany tamin'ny iPhone 5s i Apple, maninona no nitombo ny mpx? Mety ho lafo taminy izany, Noo
Tena mampihomehy ve ianao, misy video marobe mampitaha ny Iphone 5 amin'ny telefaona finday marobe, ny matanjaka indrindra amin'ny android ary nanjary nampihomehy izy ireo! Jereo izy ireo ao amin'ny YouTube, tena TSY MAINTSY tokoa ny mahita fa mandeha ny 4-core S4 tsara kokoa noho ny S4 8-core Azonao atao ve ny mino zavatra toy izany? Fantatrao ve ny antony hitrangan'izany? oh ary ny manaparitaka azy dia ny iphone 5 no 5s no nikapoka azy tamin'ny fampisehoana, ary farany, iphone 5s vs Galaxy NOte 3, nampihomehy ny FANAMARIHANA, miaraka amina processeur sy 3gb ram. rehefa Samsung manana ny rafitra misy azy ary manatsara azy io ho an'ny fampitaovana avy eo dia ho tsara izy ireo mandritra ny fotoana maha-efijery goavambe miaraka amina fiasa maro TSY MAHATONGA rehetra. Ho azy, satria mbola misy ny INDIANS mieritreritra fa ny megapixel betsaka kokoa dia kalitao tsara kokoa, mitadiava konsep megapixel amin'ny wikipedia, maimaim-poana ny fahalalana…. Araka ny nolazain'ny namana fa tsy mividy fakan-tsary CANON, na NIKON amin'ireo izay mitentina mihoatra ny 2 arivo dôlara, hividy Galaxy izay mitifitra sary amin'ny 13mp aho, hahahaha ilay adala, aleon'izy ireo mitohy ny sary. kalitao sy fisainana indroa, Inona ny adala! .. fa ny marimarina kokoa aza, ny sary dia ampiasaina amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo fa tsy ho an'ny serivisy matihanina satria tsy manana ny tena kalitao, ary raha hoentin'izy ireo hanonta azy ireo, hataon'izy ireo ho 6 * 4 izy ireo, izany hoe, misy sc 1 an'ny habe dia ampy ary ny habe sisa tavela .. miaraka amin'ny 8mp ao anaty fakan-tsary iray dia mihoatra ny ampy, ka izao Samsung dia miresaka momba ny fakantsariny, sy ny fikirakirana ary ny fahatsiarovana ram izay hahatonga azy ireo hahomby kokoa, fantatrao ny henakisoa? ny henan-kisoa dia mampiasa fako fitadidiana, tsy misy kalitao ao anatin'ireo sombin-javatra ireo .. Apple dia tsara tokoa ka ireo orinasa ankehitriny dia miatrika izany amin'ny alàlan'ny fitarihana ny dokam-barotra, fantatrao ve ny kisoa ?? Ny hazo mamoa dia atsipy vato, ilay tsy manana, tsy jerena ny saina. Faly be aho fa fantatro fa mbola 8mp ny fakan-tsary, tsara ny nieritreretako fa afaka mividy ny terminal 16GB aho dia tsy mila toerana bebe kokoa ... amin'izao fotoana izao dia mbola betsaka ny 8mp ... ny zavatra hafa tokony hatao dia mamela hifehezana ny fandraisam-peo 1080 ka hatramin'ny 720 raha tianao ... sns .. ahh ary tsarovy ny ANTI Iphones fa raha matihanina ilay bandy dia haka sary tsara kokoa amin'ny finday izy noho ny olona hafa satria hain'izy ireo ny maka zoro, ary toerana mankasitraka azy ireo amin'ny fakana sary ....
Marco Aurelio Burgos Caricol dia hoy izy:
XDDDDD izay alain'i Apple amin'ny android ... Ankehitriny, hadinoko fa namoaka ny OS voalohany ho an'ny finday avo lenta izy ireo, ary koa ny voalohany namorona azy ireo. Ary raha ny fanazavana, raha izy ireo no tsara indrindra, nahoana izy ireo no milaza fa mampiakatra ny valin'ny benchmark? Inona no tsy voalohany, mamitaka anao izy ireo ary ambonin'izany dia miaro azy ianao ...
Valiny tamin'i Marco Aurelio Burgos Caricol
giorat23 dia hoy izy:
Haha milaza ny anarany daholo ny solonanaranao! MAAFY Android troll tezitra maneho hevitra amin'ilay pejy niresahan'izy ireo momba ny iPHONE sy ny APPLE .. hahaha mandehana milalao ny kilalao plastika sy fakan-tsary super mega hyper! Na manolora tena hahitanao hevitra vitsivitsy izay misy fakan-tsary Android dia TRASH raha ampitahaina amin'ny an'ny iPhone 5s., Ny hany misy ao anaty sary dia ny lumia ao amin'ny fizarana sary.
Valio i giorat23
Paston inona no nosokafako nomena an'i Apple hanao an'ity doka ity
Jose Carlos Dominguez dia hoy izy:
ianareo anti iphone dia tsy hijanona hahagaga ahy mihitsy
Valiny tamin'i Jose Carlos Dominguez
Ary vao mainka ireo manana solonanarana: ANDROID, toa ilay badobe etsy ambony. Haha avelany amin'ny lolompo mandrakizay izy ireo.
inona no antony ianao
Andao hojerentsika NY FITIAVANA mpampiasa Apple sy iPhone no mandefa tranonkala android ... TSY MISY. Etsy ankilany, ny APPLE sy ny tranokala iPhone 90-% (ary tsy mahomby aho) dia mpampiasa fako lagndroid ... Ary kisendrasendra fa 90% amin'ireo (ary tsy mahomby aho) no tsy dia atokisan'ny mpampiasa marika na rafitra ary raha vantany vao azon'izy ireo atao dia sahala amin'ny CRAZY mifamadika amin'ny iPhone .. Mpivarotra finday nandritra ny taona maro aho ary toy izany hatrany, avelao izy ireo.
Ao anatin'ny tontolon'ny maripana toy izany [toy ny an'ny telefaona finday], tsy misy dikany ny fampiasana processeur quad-core raha toa ka afaka manampy herinaratra ianao rehefa tsy miasa ny fotony sasany. Mbola tsy nahita mpanamboatra fikirakirana finday iray aho (ankoatran'ny Intel miaraka amin'ny Bay Trail) afaka manao an'io araka ny tokony ho izy. Mandra-pahatongan'izany, ny tanjona roa dia ny core roa.
Rafa huncal dia hoy izy:
mahatadidy zavatra iray? mpaka sary matihanina iray no manao fahagagana amin'ny fakantsary misy azy ireo, fantatr'izy ireo ny ifantohany, ny hazavany ary izany mololo rehetra izany, fantany ny fomba hahazoana tombony betsaka amin'ny iphone sy ny iphone namaly, dia izay ihany. angamba ny olona normal maka sary miaraka amin'ny sony misy fakan-tsary 20 mpx dia tonga miaraka amin'ny iphone izy ary mamono ny olona rehetra!
Valiny tamin'i Rafa Huncal
toy ny lahatsoratra mirona tendrena loatra .. raha miverina amin'ny lasa isika ... ny iphone5 dia nanana fakantsary tsara indrindra amin'izao fotoana izao, mitovy ny 4 ary ny 4 hafa mitovy ... ny iphone 6 manaraka koa hanana ny tsara indrindra fakan-tsary sy ny sisa .. ity lahatsoratra ity Ny tena marina dia mampihomehy .. raha ny fakan-tsary finday, marika iray ihany no manome ny tànany amin'ny hafa rehetra: Nokia miaraka amin'ny lumia, na iza na iza tia azy na tsia wp, fa ny ny fakan-tsary dia eo ambonin'ny apple, samsung, htc sns ... fa ny lahatsoratra toa an'io dia milaza fa «zatra nanolotra fakan-tsary fakan-tsarimihetsika tsara indrindra tamin'ny finday isan-taona ny paoma, mampiseho ny haavon'ny famitahana tena izy, ary toy izany koa. hamitahana ny hafa, raha angon-drakitra tsy marina izy io, tsy misy tanjona, tena manaitra ary tsy misy teritery matihanina ...
Synoga dia hoy izy:
Fanazavana fotsiny, nilaza ilay lahatsoratra hoe "Iray amin'ireo fakantsary tsara indrindra eny an-tsena" fa tsy ny tsara indrindra, araka ny voalazanao. Raha tsy izany dia ekeko 100% aminao.
Ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fampivoarana ny iPhone dia tsy mpankafy Android, heveriko fa mpankafy iPhone tsy afaka manaiky ny fatiantoka ny fitaovany raha ampitahaina amin'ny fifaninanana, noho ny fitiavany ilay orinasa fotsiny.
Milaza mpisera paoma miaraka amin'ny appletv, iphone, mac ary ipad ankoatry ny hafa.
Mamaly an'i Sinoga
Raha ny marina dia tompona niavonavona an'ny iPhone 5 aho, talohan'ny iPhone nataoko finday windows ary azoko lazaina fa ny finday tsara indrindra nananako tamin'ny fiainako dia ny iPhone, tsy mikasa ny hiova amin'ny fiainana aho ... ny Android izay tonga eto hanala baraka appel na iphone lazaiko anao, inona ny fiainana mampalahelo indrindra azonao amin'ny pejy iray miresaka vokatra hafa noho izay anananao
Hoy ny vadiko "fa na iza na iza mitsikera IPhone dia satria mbola tsy nanana ...", mifameno aho, raha tsy sahy izy ireo na tsy manam-bola hifanarahana amin'ny iray, aza mitsikera .... Hanome anao ny fotoana hanananao izany ny fiainana.
Apple dia afaka nanolotra ny iPads vaovao amin'ny 22 Oktobra
Ahoana ny fomba hanampiana fanampiana ara-potoana amin'ny kalandrie?